निराश जनता र च्यातिएको आशा
[2015-01-21 오후 8:29:00]
वर्षौ देखिको एउटै सपना । वर्षौ देखिको एउटै चाहाना । जुन हो “संविधान“ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दले अन्ततः मुलुकलाई गणतन्त्रको कित्तामा उभ्यायो । जनताको लागि जनताकै संविधान भन्ने पक्षले प्रमुखता पायो । अनि जनता पनि त्यहि चाहनावाट विमुख हुने र अछुतो रहने कुरै भएन् । संविधानसभा जुन राजनीतिक घटकको चाहाना भएपनि त्यसको गठन भयो ।
त्यहिअनुसार दुईहजर चौसठि सालमा पहिलो निर्वाचन भयो । जनताले आआफनो किसीमले संविधान निर्माणको जनाधार दिए । तर दलहरु चुके । सभासदहरु झुके । जनताहरुलाई गरेको वाचा उनिहरुले पूरा गर्न सकेनन् । लाचार वन्दै संविधानसभाको विघटनमा उनिहरु लागे ।
जनताको धैर्यता टुटेन् । फेरि पनि संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन भयो , जनता स्वतस्फूर्त आफनो र राम्रो संविधानको लागि मतदानमा सहभागी भए । जनप्रतिनीधि चुनेर पठाए । तर विभीन्न मुद्दा र प्रकृयामा आपसी सहमति हुनै सकेन् । तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्न संविधान सभा झण्डै असफल झै भैसकेको छ ।
दलहरुवीचमा आपसी मुल मुद्दामा तालमेल हुन नसक्दा भोलि अर्थात माघ ८ मा संविधान जारी नहुने पक्का भैसकेको छ । दल र नेताको यहि अर्कमण्र्यतालाई जनता शव्दमा यसो भन्दैछन् ।
त्यो कुन संविधान हो ? जुन संविधान ल्याउन एक आपसमा मन मिल्नै नसक्नु । त्यो कुन संविधान हो, जुन जनताको लागि भनेर राज्यको ढुकुटीमा वर्षौ सम्म वम्ह्रलुट मच्चाईरहने ? संविधानको लागि जनताले एकचोटी हैन दुईचोटी मताधिकार प्रयोग गरे । संविधान संविधान भन्दा भन्दै ६ वर्ष वित्यो । न देशले संविधान पाउने छाट छ, न जनताले नै चाहेको संविधान पाउन सक्ने भए ।
जनताले वडो आशाका साथ संविधान सभाको निर्वाचनमा आफना जनप्रतिनीधि चुने । संविधानसभामा पठाए । जनताले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्दको मार खेपे । कति वावुआमाले आफना निर्दोष सन्तान आखै अगाडी मारिएको दुश्य विर्सन सकेका छैनन् ।
कति हाम्रा छोरीचेलीहरु दुई छाकको लागी डास्नवारमा नागिन विवश पारिए । कति नावालहरु आफनो थातथलो छोडेर शहरको पेटिमा सहाराको खोजीमा आउन विवश भए । कति दाजुभाई प्रत्येक दिा दोश्रो दर्जाको नागरिक वन्दै देश छोड्न वाध्य पारिए ।
अनि कति दीदीवहिनीहरु योवनमा नै पुछिएको सिउदो वोकरे हररात चिसो सिरानीमा कोल्टे फेर्दै रात विताउन वाध्य पारिए । यि सवको मुल कारण थियो त परिवर्तनको लागी भन्दै छेडिएको कथित जनयुद्ध थियो ।
तर आज ति भावना र मर्महरुको विरुद्ध संविधानको नाममा विपक्षी खेमाले जुन नागो नाच देखाउदै छन् ,त्यसले कहिल्य पाउने देश र जनताले संविधान । दायावायाँ का देशहरु औद्योगीक र वैज्ञानिक क्रान्तिवाट कहावाट कहा पुगिसके तर हामी नेपाली भने आउनै नसक्ने संविधानको पखाईमा कति दिन रुम्लीरहने ? प्रश्न मुलुक हाक्नँ खोज्नेहरुको लागि ?